Igumbi lezivakashi le-farmhouse elithokomele - I-Airbnb
Igumbi lezivakashi le-farmhouse elithokomele
Portage la Prairie, Manitoba, i-Canada
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Tracy
U-Tracy Ungumbungazi ovelele
Ikhaya lezwe elinentelezi yasemakhaya etholakala esizeni somuzi womndeni wokuqala, sitholakala endaweni ebukekayo yethafa - ibanga elingaphezu kwehora ukusuka eWinnipeg.
Sinikezela ngendawo yokuhlala yeholide ye-B & B/Farm kanye nokunikeza indawo yemicimbi ekhethekile yangokwezifiso. Umbono wethu uwukuba imindeni, amabhizinisi kanye nabantu ngabanye bathole indlela yokuphila ephansi yepulazi langempela njengoba beza bezoqoqana, bafunde noma bahlale… ithuba lokwehlisa ijubane, baphumule futhi bajabulele ezinye zezinjabulo zokuphila ezilula.
I-Prairie Garden Room itholakala esitezi esikhulu sekhaya. Lawa makamelo agqamile kodwa athokomele, anikeza ukubukwa okumangalisayo kwezingadi zethu zangaphambili.
Bhuka isikhala esivamile esiseduze ukuze uthole izihambeli ezingu-3 ezengeziwe ngo-$20/ubusuku/umuntu. Kunikezwe omatilasi baphansi nezingubo zokulala.
I-HDTV ene- I-Roku
ubusuku obungu-7 e- Portage la Prairie
I-Portage la Prairie inikeza izindawo eziningi nezinsiza. Ngena kwenye yezindawo eziningi zokudlela nezindawo zokudlela ezisetshenziswa endaweni, vakashela i-Fort la Reine Museum noma uthathe uhambo olufushane uye enyakatho ne-Delta Beach esendaweni eseningizimu yeLake Manitoba.
Silapha ukuze senze ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka. Singakubonisa indawo bese sikushiya uphumule noma ungabhuka isikhathi nathi ukuze uthathe uhambo lwamadlelo noma ufunde kabanzi ngemfuyo, izitshalo nokuthi ukudla kwakho kutshalwa kanjani.
Silapha ukuze senze ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka. Singakubonisa indawo bese sikushiya uphumule noma ungabhuka isikhathi nathi ukuze uthathe uhambo lwamadlelo noma…
UTracy Ungumbungazi ovelele